Marxuum- Maxamed Axmed Ciise: Suxufi Weyn Oo Ka Baxay Saxaafadda Somaliland |
Marxuum- Maxamed Axmed Ciise: Suxufi Weyn Oo Ka Baxay Saxaafadda Somaliland
Hargeysa (Gabiley.net) Alle ha u naxariistii waxa saxaafada Somaliland ka geeriyooday suxufi weyn oo kaalin muuqata ka soo qaatay warbaahinta Somaliland mid gaar ah iyo mid dawladeedba. Waxa uu ahaa Maxamed Axmed Ciise oo loo yaqiin (Maxamed Case), waxa ay hedu ku heshay magaalada Addisababa Sabtidii , halkaasi oo uu u joogay xaalad caafimaad.
Marxuum Maxamed waxa lagu xasuusan doonaa kaalintii mugga lahayd ee uu kaga jiray saxaafadda oo aan la heli doonin cid buuxisa. Waxa uu ku soo jirey warbaahinta kala duwan rubuc qarnigii ugu dambeeyay isaga oo ka soo shaqeeyay wargyesyadii gaarka ahaa ee ugu horeeyay ee ka soo baxa Hargaysa kadib la soo noqoshadii madaxbannaanida Somaliland. Sida oo kale waxa uu ka soo shaqeeyay warbaahinta dawladda oo uu illaa haatan ka mid ahaa, waxaanu ka wada shaqeynayay Telefishanka, wargayska DAWAN iyo wakaalada wararka oo uu mid walba waqtigeeda si buuxda uga shaqaynayay.
Alle ha u naxariistee Maxamed Axmed Ciise, waxa uu ku dhashay magaalada Hargaysa hilaadii sannadkii 1966-kii , waxaanu ku soo barbaaray Hargaysa, waxna ku soo bartay.
Suxufinimada waxa u dheeraa mihnadda farsameed isaga oo ka soo shaqeeyay qaybta farsamada Radio Hargaysa iyo war laliska oo uu aqoon waafi ah u lahaa.
Waxa kale oo uu ka soo shaqeeyay wargeyskii codka Hargeysa ee soo bixi jirey sagaashameeyadii iyo qaybta wararka Radio Hargeysa oo uu muddo dheer ka soo shaqeeyay.
Waxa uu ka mid ahaa raggii aasaasay wargayskii Maandeeq ee dawladda 1998-kii ee haatan la baxay DAWAN iyo sida oo kale wargayskii Geeska Afrika oo ay soo saari jirtay wasaaradda warfaafinta sagaashameeyadii.
Waqtigan Maxamed waxa uu si joogto ah uga shaqeynayay warbaahinta kala duwan ee qaranka sida Telefishanka, wargeyska DAWAN iyo wakaaladda wararka SOLNA,waxaanu ahaa suxufi hawlkar ah oo si isku mid ah u wada guta shaqadiisa. Waxa uu soo saari jiray barnaamijyo kala duwan oo ka baxa idaacadda, wargeyska iyo telefishankaba, waxaanu aqoon dheeraad ah u lahaa luuqadaha Ingiriisida, Carabida iyo Soomaaliga oo uu u dhashayba.
Marxuum Maxamed Axmed Ciise, waxa uu ifka kaga tegay xaas iyo carruur. Waxa aan Ilaahay uga baryeeynaa inuu ka waraabiyo jannadii fardowsa, qoyskiisii iyo eheladiisii iyo asxaabtaba samir iyo iimaan ka siiyo. Innaa lilaahi wa ina Ilaahu Raajacuun.
Geesta kalena, waxa dhambaal tacsi ah u diray qoyskiisii, carruurtiisii iyo axsaabtiisiiba Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo marxuumka ku sifeeyay suxufi weyn oo ka baxay warbaahinta dalka gaar ahaan qalabka warbaahinta ee qaranka oo uu saddex ka mid ah si buuxda uga wada shaqayn jiray.
Dhammaan Maamulka iyo shaqaalaha Gabiley News Networ waxa ay marxuum-Maxamed Axmed Ciise ILAAHAY uga baryaya inuu naxariistii janno ka waraabiyo, qoyskiisii, caruurtiisii iyo bahda saxaafadda Somaliland-na samir iyo iimaan ka siiyo.
Waa qayb ka mid ah shaqaalihii Wasaaradda Warfaafinta 2003 oo uu ka dhex muuqdo Marxuumku, inta aan wajiyadoodu idinka qarinayna waa inta aan ognahay inay Geeriyoodeen ee Alle Naxariistii Janno ha ka waraabiyo dhammaantood.